Fampianarana hamerenana ny iMessage ao amin'ny iOS 7 | Vaovao IPhone
Alex Ruiz | | Fampianarana sy torolàlana
Hatramin'ny namoahana ny iOS 7 maro nitatitra olana momba ny iMessage ny mpampiasa, mikasika ny zava-misy fa tsy tonga ireo hafatra alefany any amin'ireo mpampifandray azy ireo ary ireo izay ampitainy dia tsy voaray amin'ny fitaovana. Angamba izy ireo dia mety ho fahatapahana manokana izay nijalian'ny serivisy tao anatin'ny iray volana lasa, saingy misy ny mpampiasa sasany izay nampitandrina momba ireo tsy fahombiazana ireo, na dia miasa tanteraka aza ny serivisy.
Ny tatitra anecdotal sasany dia nanondro fa ny olana dia mety niharatsy tamin'ny fandefasana ny herinandro lasa teo ny iOS 7.0.2, fa ireo olana voalaza ao amin'ny serivisy iMessage ireo dia avy amin'ny daty iray taty aoriana noho ny famoahana ny fanavaozana. Ny mpampiasa sasany dia nitatitra izany mamono ary miverina indray Ny fitaovana iOS ataon'izy ireo dia manamboatra ny olana, ny sasany kosa manondro fa tsy nety tamin'izy ireo io fomba io. Fa ny fanandramana amin'ny fitaovana iray izay nanana an'io olana io tamin'ny iMessages, dia nanatsoaka hevitra fa mamaha ny fikirakirana tambajotran'ilay fitaovana ity olana ity. Mazava ho azy, miverina manana ny toeran'ny tambajotram-pitaovan'ny fitaovana iOS ho very ny teny miafin'ny Wifi rehetra amin'ireo tamba-jotra voatahiry ary tsy maintsy hiditra azy ireo indray isika. Avy eo dia manondro ny dingana tokony harahintsika amin'ny fitaovantsika hahatratra ny vahaolana:
Atsaharo ny iMessage ao amin'ny Settings> Messages> menu iMessage
Hamboarinay indray ny fikirakiran'ny tamba-jotra ao amin'ny Settings> General> Reset> Avereno ny fikirana tambajotra
Miverina any amin'ny mampihetsika iMessage ao amin'ny Settings> Messages> iMessage
Ity tutorial kely ity dia manamboatra ireo bibikely hafatra ireo tsy voaray na tsy nalefa na ireo tavela mihantona mandritra ny fizotry ny fandefasana ary farany dia ireo izay aseho miaraka amin'ny fiantsoana mahasosotra ao amin'ny faribolana mena, satria tsy natolotra. Aorian'ny fanarahana ireo dingana ireo dia ampidirinay indray ny teny miafina momba ny tamba-jotra Wi-Fi izay ampiasainay an-trano sy any am-piasana na any an-dakilasy ary haverina amin'ny laoniny ny fikirakirana tambajotra, miaraka amin'ny fanitsiana ny serivisy iMessage ary ny fifandraisana Wi-Fi indray. Vahaolana tsotra ho an'ireo mpampiasa mitaraina momba ity olana ity, raha toa ianao ka anisan'ireo mpampiasa iOS manana an'io olana io ao amin'ny iMessage, ampahafantaro anay raha efa voavaha amin'ireo dingana ireo izy.
Fanazavana fanampiny - Ny iOS 7.0.2 dia azo alaina (alaina fampidinana mivantana tafiditra)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Famahana olana iMessage amin'ny iOS 7 (Tutorial)
feno fotaka dia hoy izy:
Manana olana hafa aho, mangataha olona hamaha izany ho ahy. Tiako ny tapaka ny 3G, mba tsy handany bateria be loatra satria ny angon-drakitra ampiasaina ihany no ananako be dia be. Eny, mandritra ny andro vitsivitsy rehefa esoriko ny 3G, mandritra ny andro vitsivitsy 4g dia mitohy ny fisehoan'ny 3G na dia kilemaiko aza ny 3G (4g). Misy vahaolana ve? Naveriko ny fikirakirana tambajotra ary mijanona ho toy izany ihany izy.
Mamaly an'i Barroso
Fiteny Nazi dia hoy izy:
Voasoratra hoe "mahita" fa tsy "manana". Mila mampiasa ny marika ianao.
Valiny amin'ny fiteny Nazi
Ary tsy mahita fatorana amin'ny tendanao ianao. Hadalana? Inona ny afon'ny teny? Andriamatoa Lisenciado …… Handeha aho.
Ny feon'ny vahoaka ... dia hoy izy:
Nosoratana ho an'ny nahazo diplaoma tamin'ny C hahahaha izy ireo dia vazivazy, manoratra araka izay itiavanao azy ny olona, ​​aza ajanona ity baolina zazakely ratsy tanteraka ity ...
Mamaly an'i La Voz Del Pueblo ...
Lisitra? Tena matotra ve? Vitao ny fanabeazana fototra nataonao ary avy eo manoratra. Mirary soa amin'ny pimples anao.
jprs dia hoy izy:
Tokony hojerenao kely izay soratanao !! «A nijaly» dia soratana miaraka amin'ny h: «nijaly» (verbe to have + participle). Fahadisoana izay tsy tsikaritry ny autocorrect matetika.
Ankoatr'izay, ny teny dia tsy tokony haverina amin'ny andalana iray ihany, fa mety ho hita ny mitovy hevitra. Ohatra: mijaly sy mijaly amin'ny voalohany, olana ao amin'ny fehintsoratra faharoa, ary manangana indray, kelikely.
Mbola, misaotra ny asanao.
Mamaly an'i jprs
Fvad9684 dia hoy izy:
Diso tsipelina ny nerd anao ary takatra mitovy, samy manana ny tsy mety isika rehetra, tsy misy na inona na inona, ataon'izy ireo izany hampahafantatra antsika ary ambonin'izany dia miomana ianao hiaraka amin'i jo.er
Valiny amin'ny Fvad9684
Tsy takatra mihitsy izay soratanao. Manoratra ianao "andao jerena", tsy "manana", "nerd" no soratanao, fa tsy "nerd", "inona" no soratanao, fa tsy "q", izay soratanao ho "ianao", tsy maintsy soratanao "ianao" , ny tsipelina dia "fetsifetsy." Oh ary ianao koa mila mampiasa marika mari-piatoana marobe; Tsy hoe takatra na tsia, dia mila manoratra tsara ianao mba tsy ho toy ny adala.
* Ankoatr'izay. Mitsikera ianao ary manana hadisoana ifotony. Fantatra amin'ny hoe bullshit izany.
Ah! Etsy an-danin'izany, mila mampiasa ny feon-teny fanentanana koa ianao. Hadalana.
Milamina, aza sarotiny ny fiainanao.
Sahala amin'ny boriky teraka tsy dia teraka ianao, ary iza no heverinao fa hampianatra kilasy fitsipi-pitenenana, mla teraka ianao mitady olona manaraka anao kokoa ...
Efa nanao izany ny mamanao 🙂
Idolium dia hoy izy:
Satria manana 7.0.2 aho, ny tsy fahombiazan'ny fandaozana tambajotra Wi-Fi taloha sy ny tsy fahazoana rakotra tambajotra data dia matetika. Tsy maintsy apetrako ny maody fiaramanidina ary esoriko mba hiverenany. Angamba ny "tsy fahombiazan'ny" iMessage dia mivoaka eo, fa tsy misy fandrakofana na dia manondro zavatra hafa aza. Tsapako satria miaraka amin'ny WhatsApp raha manandrana manoratra aho dia tsy mihetsika ny bokotra mandefa ary hitako fa tsy misy fandrakofana.
Mamaly an'i Idolium
Mbola tsy nahita olana betsaka toy ny tamin'ny and 7 aho
6 aza tsy nahomby tamin'ny fahombiazan'ny iPhone
isan'andro diso fanantenana kokoa !!
Benybarb dia hoy izy:
Raha ny marina dia mitondra ady bebe kokoa noho ny kalitao io banga avy amin'ny iOS 7 io, izany no tsy nametrahako azy, tsara be aho tamin'ny 6.1.3
Mamaly an'i Benybarb
Junior vargas dia hoy izy:
Eny, misy zavatra hafahafa mitranga amiko, ny kaontiko iMessage sy FaceTime dia miseho miaraka amina hadisoana fampandehanana ary mbola afaka mandefa hafatra sy manao antso FaceTime aho, matetika amin'ny tamba-jotra 3G sy Wifi.
Valiny tamin'i Junior Vargas
Pao dia hoy izy:
Ny zavatra mitovy amiko dia mitranga amiko, miseho ny lesoka nefa mbola mandeha foana, ny tiako holazaina dia fampitandremana diso
Pedro Lopez Berbel dia hoy izy:
Raha izany, amiko, iMessage dia nanomboka tsy nandefa azy ireo hatramin'ny fanavaozana ny iOS 7.0.2. Rehefa avy nihazakazaka ny tutorials tonga lafatra ny zava-drehetra. Misaotra betsaka amin'ny vaovao.
Na dia manana laza malaza amin'ny olana aza ny iOS 7 dia tsy hitako ho matotra izany. Izy io dia miasa tsara lavitra noho ny iOS 6, ary tsy azo lazaina hoe rafitra tsy milamina izy io. Tsy azoko ireo diso fanantenana be !!
Valiny tamin'i Pedro Lopez Berbel
Eny, ity iOS 7 ity dia mandiso fanantenana ahy ankoatry ny fananako an'ity olana amin'ny sary ity, ary very fambara aho, nanjavona ny 3g, nipoitra ny E ary avy eo nisy zavatra hafa niseho toy izany koa ny gprs ho fanampin'ny fanjifana bateria ao amin'ny iphone 4, ilay 6.1.3. XNUMX dia nilamina kokoa ny ahy ity. Misaotra Alex noho ny fotoananao mba hanampy anay hanamboatra ireo bibikely ireo,
Tsy voavaha io olana io tamiko 🙁
Allen.ax7 dia hoy izy:
Tsy niasa ho ahy io, kivy aho, tsy hitako intsony izay hatao ... andao jerena izay hitako fa misaotra 🙂
Mamaly an'i Allen.ax7
AGN dia hoy izy:
Ny marina dia, raha ios7 dia mamela zavatra be faniriana, ny olako dia amin'ny imessage, ny contact-ko, ny sasany tsy mandray ny hafatro, efa nanao ny tolo-kevitra hamerenana ny fikirakirana ny tambajotra aho ary ny zavatra rehetra dia mijanona ho iray ihany, izay heverina fa tsy mandeha ny vahaolana. , misaotra tamin'ny fahazoan-kevitra
Valiny amin'ny AGN
ny iMessages tonga any amin'ny iphone hafa, inona no azoko atao hisorohana izany tsy hitranga? Efa nanova ny Apple ID aho satria nanana an'io iPhone hafa io, ho ampy ve izany sa tokony hafindra ihany koa ny fikirakiran'ilay iPhone hafa?
Sh3jo dia hoy izy:
Ampiasao. 3G sioka tsy voafetra avy amin'ny cydia!
Ary ampian'izy ireo ny App Messages sy THE APP Settings! Ary taran !!!!! Miasa indray ny Imessage sy ny FaceTime!….
Toy ny mahazatra dia toa brothel misy hadisoana i Apple miaraka amin'ireo kinova IOS vaovao
Mamaly an'i Sh3jo
Herinandro lasa izay dia nividy iPhone 5s tamin'ny fanavaozana ilay rindrambaiko ho 7.1 aho, tsy hita ny nomeraon-telefaonako na amin'ny imessage na amin'ny fotoana iasana, mijanona mandritra ny ora maro miandry ny fampidirana azy ary avy eo mivoaka ny lesoka fampahavitrihana ary mbola tsy nanandrana aho ny zavatra rehetra ary tsy misy mandeha amiko.